Mareykanka oo sheegay in dhacdadii Bariirre uusan ku dilin dad shacab ah | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Mareykanka oo sheegay in dhacdadii Bariirre uusan ku dilin dad shacab ah
Mareykanka oo sheegay in dhacdadii Bariirre uusan ku dilin dad shacab ah
War-saxaafadeed uu soo saaray Taliska Ciidanka Mareykanka Afrika ee AFRICOM,fadhigooduna yahay Dalka Jabuuti ayey ku beeniyeen in dhacdadii 25kii August ka dhacday degaanka Bariirre ee lagu dilay 10ka Qof aysan ku jirin dad shacab ah.
Taliska ayaa warbixintiisa ku sheegay baaritaan dheer oo uu sameeyay kaddib in uu ogaaday in dadkii lagu dilay Bariirre ay ahaayeen Al-shabaab ee aysan ahayn dad shacab ah.
Ka hor weerarkaas ayaa warsaxaafadeedka lagu sheegay in “Ciidamada iskaashanayay ee dowladda Soomaaliya iyo kuwa Mareykanka ay qorsheeyeen weerarkaas waliba si faahfaahsan,waxaana fulinnay weerar isku dheelli tiran oo ay dowladda Soomaaliya hoggaamineysay”,ayaa lagu yiri War saxaafadeedka ka soo baxay Mareykanka.
Jen Axmed Maxamed Jimcaale Cirfiid oo ahaa Taliyihii hore ee Milatariga Soomaaliya ayaa ka hor inta uusan is casilin weerarkaas ku sheegay in dad shacab ah lagu laayay,sidoo kale guddoomiye ku xigeenka Gobolka Shabeellaha hoose Cali Nuur Maxamed ayaa isna Ciidamada Mareykanka ku eedeeyay in Bariirre ay ku laayeen dad shacab ah.
Meydadka Dadkii lagu dilay Bariirre ayaa la aasay 10 maalmood kaddib geeridooda kaddib markii ehellada Meydadkaas ay aqbaleen Baaritaan in lagu sameynayo weerarkaas oo Dowladda Soomaaliya iyo Mareykankuba sheegeen in Al-shabaab lagu laayay.